‘समाजवादका सर्जक’ सुबर्णलाई किन बिर्सियो कांग्रेसले ? Global TV Nepal
‘समाजवादका सर्जक’ सुबर्णलाई किन बिर्सियो कांग्रेसले ?
समाजवादी नीतिको प्रस्ताव सुवर्ण शमशेरले नै गरेका थिए
काठमाण्डौं । नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांगेसका नेता तथा कार्यकर्ताले आज स्वर्गिय गणेशमान सिंहको स्मरण गरे । निष्ठा, त्याग र साहसका प्रतिमुर्ति, जन(आन्दोलनका कमाण्डर, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा लौह पुरूष वीर गणेशमान सिंहको १०६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा सिंहप्रति सामाजिक सञ्जालमा उनको योगदानको स्मरण गरेको पनि बाक्लै देखियो । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ आज कांग्रेस संस्थापक नेता , पूर्व सभापति सुवर्ण शम्सेरको ५३ औं स्मृति दिवस बारे ।
महामन्त्री एवं बिपी पुत्र डा शशांक कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन् नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता, पूर्व सभापति सुवर्ण शमशेर राणाको ५३ औं स्मृति दिवसको अवसरमा हार्दिक श्रद्धासुमन !!!
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोनलमा अतुलनीय योगदान गरेका सुबर्ण शम्सेरको २०३४ कात्तिक २४ गते कोलकातामा निधन भएको थियो ।
कांग्रेसले बिपीको समाजबादकै ब्याज खाएको, गणेशमानकै निष्ठा बेचेरै बाँचेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् बेला बेलामा । तर कांग्रेसलाई आजको अबस्थामा पुर्याउन महान योगदान गरेका समाजवादका सर्जक सुबर्ण किन ओझेलमा भनि प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् ।
को हुन् सुबर्ण ?
२०१२ माघमा वीरगन्जमा सम्पन्न महाधिवेशनले गणेशमान सिंहलाई पराजित गर्दै सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा निर्वाचित ग¥यो । यो महाधिवेशनले कांग्रेसको इतिहासमै अति महत्त्व राख्ने समाजवादी सिद्धान्तलाई अनुमोदन ग¥यो । त्यसपछि कांग्रेस समाजवादी पार्टी बन्यो । समाजवादी नीतिको प्रस्ताव सुवर्ण शमशेरले नै गरेका थिए ।
कांग्रैसले संविधानसभा लगायतको माग गर्दै २०१४ मङ्सिर २२ देखि भद्र अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ ग¥यो । ठूलो दबाबपछि २०१५ जेठ २ गते सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा सर्वदलीय चुनावी मन्त्रिपरिषदको गठन भयो ।
२०१५ भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री हुँदा उनले दोस्रो बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
तानाशाही कदमबाट अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै २०१७ साल माघमा भारतको पटनामा उनले पार्टीको सम्मेलन बोलाए । सम्मेलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि पुनः सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय ग¥यो । संघर्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुवर्णलाई सुम्पियो । सोही कारण निरंकुश पञ्चायती सरकारले उनको बालुवाटारको दरबार, ललिता निवास (हालको राष्ट्र बैङ्क भवन) जफ्त ग¥यो ।
दलमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशिन बाध्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको विदेशी भूमिमा विचल्ली हुनथालेपछि सुवर्णको काँधमा फेरि तिनको भरणपोषणको थप जिम्मेवारी थपियो ।
२००४ चैत ३१ गते श्री ३ मोहन शमशेरले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई अवैध घोषणा गरेपछि नेपालजस्तो मुलुकमा राणा शासन फाल्ने सशस्त्र संघर्षमात्रै उपयुक्त औजार हो भन्ने तर्कमा २००६ सालसम्म वीपी पनि सहमत भए । २००६ चैत २७ गतेदेखि कोलकातामा दुवै दलको संयुक्त अधिवेशन बोलाइयो । दुवै पार्टीले ’राष्ट्रिय’ र ’प्रजातन्त्र’ शब्द झिक्ने सहमतिपश्चात पार्टी एकीकरण भयो । र एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस बनेपछि सुवर्ण कोषाध्यक्ष बने ।
राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि बीपीसहित थुप्रै नेताहरूलाई सुन्दरीजलमा नयाँ जेल बनाएर थुनियो । उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर भने अघिल्लो दिन कोलकाता गएकाले जोगिएका थिए । महेन्द्रले उनलाई आफ्नो कदममा साथ दिन भन्दा प्रजातन्त्र विरुद्धका काममा सहयोग गर्न असमर्थता देखाएपछि उसो भए देश बाहिर जान सङ्केत गरेका थिए ।
राणा परिवारमा जन्मिएर पनि सुवर्ण सम्शेर राणाले राणा शासन विरूद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
राणा नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष, बरिष्ठ राजनीतिज्ञ थिए । यिनी २०१५ सालमा १ वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यिनी नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष र पछि पञ्चायतकालमा बी. पी. जेलमा हुँदा कार्यवाहक सभापति बनेका थिए। यिनी नेपालका विद्वान राजनीतिज्ञ मानिन्छन् ।
२३ वर्षको उमेरमा स्नातकोत्तर गरेका सुवर्ण शमशेर राणा परिवारका प्रथम स्नातकोत्तर थिए । केही समय राजा महेन्द्रलाई राजदरबारभित्र गई पढाउने काम गरेका सुवर्णको स्वभाव अन्य राणाको भन्दा नितान्त फरक थियो ।त्यसैले देश र जनताको मुक्तिका लागि राजनीतिमा होमिए ।
यसरी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा , कांग्रेसको राजनीतिक यात्रामा धेरै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका सुबर्ण शम्सेरलाई कांग्रेसले बिर्सियो कि भनि आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
खासगरि इतिहासमा बिद्यार्थी, नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्ताले उनको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दे स्मरण गर्न जरुरी छ ।
मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा
प्रधानमन्त्री देउवाले पाउलान् त विश्वासको मत ? यस्तो छ अंकगणित
औषधि पसलहरुले उपभोक्ता ठग्ने क्रम रोकिएन, धरानमा अनुगमन, केहि पसल शिल
तीन देशमा सरकारका राजदूतहरु सिफारिस